Phakathi kwabasebenzisi basekhaya baseNetwork network, iphepha lomhlobo owayengumhlobo kaTimati Alena Shishkova lithandwa kakhulu. Intombazana ihlala ishicilela iindaba ezizayo malunga nobomi bakhe, kwaye namhlanje isayinwe ngabantu abayizigidi ezingama-3.7.
I-microblogging ye-Alyona Vodonaeva ayithandwa kakhulu - "kuphela" abalandeli abayizigidi ezili-1.4, kodwa lowo owayengumhlanganyeli wenkohlakalo ebonisa ukuba "Dom-2" inokuziqhayisa ngengxoxo echaphazelekayo yezithuba zawo.
Namhlanje u-Alena uthumele isithombe kwiphepha lakhe, apho wafotshwa khona no-Alyona Shishkova ngelixa ehambela umboniso wefestile kaBel Pot Pot.
Ngesinye isikhathi, u-Alena Vodonaeva, no-Alena Shishkova beza kunqoba uMoscow kwiTyumen ekude. Inkwenkwezi yangaphambili ye "Doma-2" yayivuyela ukudibana nomama welizwe ekudibeneyo. U-Alena kwiimbono ezithombeni wachaza ukuba amantombazana aseTyumen awona mahle kakhulu:
Amantombazana aseSiberia ayona mhle kakhulu 😜 Andifuni ukuthetha, kodwa thina, amantombazana aseTyumen, ukususela ebuntwaneni silala kwiifriji 👌
Abalandeli baka-Alyona abazange bahlanganyele naye ngentshiseko, beqaphela ukuba amabini amantombazana ayabonakala engaqhelekanga. Ngokwamaphephancwadi, zombini iAlyons akufanele ibonge iSiberia, kodwa iingcali zeplastiki:
Izandla zegolide zamagqirha kunye ne-cosmetologists 👏🏻👏🏻👏🏻, phi iSiberia?
Utyalo-mali ngokubonakala ... okwamanje akuyi kuba kuhle?
Ukulala etafile zamagqirha)))
Abathathi-nxaxheba kwiprojekthi "Dom-2" abalandeli abatshitshisiweyo ngeemeko zokuphila
UDmitry Nagiyev waqala ukuphawula ngolwalamano lwakhe no-Olga Buzovoy
Imidlalo kunye nemincintiswano yenkampani entsha yeNyaka ka-2018 emsebenzini: ehlekisayo kwaye ehlekisayo
Senza indawo yomntwana osemtsha: imigaqo emithathu yokulungiswa okufanelekileyo
Isaladi "Ukuqala Kwehlobo"
Isipho kumama ngezandla zam: ingcweti eyenziwe ngeboya yekotoni, iklasi yeklasi kunye nesithombe